Ankehitriny ny vokatra TPE dia be mpampiasa amin'ny asa ataontsika andavan'andro, azo jerena ihany koa fa ny vokatra TPE dia nanjary nilaina tsikelikely tamin'ny fiainantsika, koa inona ireo akora manta? Ahoana no amangaroana ny TPE? Avy amin'ity mba hahatakarana:
TPE (Thermoplastic Elastomer) dia karazana fitaovana thermoplastic elastomer. Izy io dia manana ny toetra mampiavaka ny tanjaka avo, ny faharetana avo lenta, ny famolavolana ny tsindrona, ny fiarovana ny tontolo iainana, tsy misy poizina ary azo antoka, ny hamafiny, ny lokon'ny loko, ny fikolokoloana, ny fanoherana ny toetr'andro, ny havizanana ary ny fanoherana ny hafanana, ny fahombiazan'ny fanodinana ambony, tsy mila izany. fanodinana volo, azo averina ampiasaina mba hampihenana ny vidiny, mety ho famolahana tsindrona indroa mitifitra izy, mifono PP, PE, PC, PS, ABS ary ireo matrix matrix hafa, na azo amboarina misaraka.
Ny TPE dia azo ampiasaina amin'ny vokatra zaza, fitaovana ara-pahasalamana, vokatra avo lenta sns ... toy ny pacifiers zaza, setroka fampidirana fanafody, klioban'ny golf, sns, fa mety koa amin'ny famokarana kojakoja mandeha amin'ny fiara.
Tombon'ny TPE ara-nofo:
Ny TPE dia azo ampifandraisina amin'ny bobongolo amin'ny famolavolana tsindrona, manala ny fampiasana additives toy ny lakaoly, mba tsy hisy fiantraikany amin'ny zavatra avy any ivelany ny fitaovana, ka tsy misy fofona hafahafa ary tsy misy fahasosorana amin'ny vatan'olombelona. Ho an'ireo fianakaviana misy vehivavy bevohoka sy zazakely, ny vokatra TPE azo antoka sy azo antoka dia ilaina ihany koa.
TPE dia fitaovana eken'ny tontolo iainana eken'ny sehatra iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao, ary ny vokatra TPE dia mitana toerana lehibe eo amin'ny tsenan'ny famatsiana fiara eropeana sy amerikana. Noho izany dia mampiasa fitaovana TPE amin'ny vokatra izahay.
Raha ampitahaina amin'ny tsihy fiara vita amin'ny hoditra nentim-paharazana mifono vy amin'ny alàlan'ny haitao famokarana synthesis sy synthesis, ny tsihy fiara TPE dia afaka mandray ny dingan'ny famolavolana tsindrona ao anaty lasitra. Ny dingan'ny fanodinana dia manafoana ny fampiasana zavatra ampiana toy ny lakaoly sy formaldehyde, ka ny akora TPE dia tsy voakasiky ny zavatra avy any ivelany, ary tsy misy fofona hafahafa. Ny akora mampidi-doza dia vokarina ary tsy manaitaitra ny vatan'olombelona, ​​ka mahatonga ny matsin'ny fiara ho tia tontolo iainana sy maharitra.
Ny fitaovana TPE dia manana fanoherana rano tsara. Azo soloina mivantana amin'ny rano izy io ho an'ny fikarakarana mora kokoa. Raha ampitahaina amin'ny olan'ny tsihy fiara nentim-paharazana izay tsy afaka hosasana dia azo esorina mivantana miaraka amin'ny basy rano ny tsihy fiara TPE ary azo ampidirina ao fiara rehefa avy maina. Mety kokoa koa ny hikarakarana azy.
Ny tsihy fiara Deao koa dia manana endrika ambony kely miendrika arc sy famolavolana lalan-kely fanodinana, izay afaka miaro ny Suède ao anaty fiara nefa manakana tsara ny tasy amin'ny rano tsy hidina ao anaty fiara.
Ity voalaza etsy ambony ity dia ny fampidirana ireo zavatra akora TPE. Raha mahita eto isika, dia azontsika atao ny mahatakatra ny fampifangaroana ny akora TPE sy ny sasany amin'ireo toetrany, mba hahafahantsika mahatakatra ihany koa ireo vinavinan'ny vokatra TPE.